Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 494000 times)
« Reply #170 on: May 26, 2011, 09:20:44 AM »
နယူးဒေလီမြို့ရှိ လူစည်ကားသော လမ်းတစ်လမ်းအတွင်း ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး လက်တွဲဝင်ရောက်လာသည်။ လမ်းဘေးတစ်နေရာမှ သူတောင်းစားတစ်ဦးက အမျိုးသမီးကို လှမ်းကြည့်ပြီးပြော၏။
"သိပ်ချော၊ သိပ်လှ၊ သိပ်ကျက်သရေရှိတဲ့ အစ်မကြီးရယ်။ ကျွန်တော် မျက်မမြင်တစ်ယောက်ပါခင်ဗျာ။ ငါးဒေါ်လာလောက် ဒါနပြုစွန့်ကြဲခဲ့ပါနော်"
ယင်းစကားသံဆုံးသည်နှင့် အမျိုးသားဖြစ်သူက အမျိုးသမီးကို ပြောသည်။
"မိန်းမ သူပြောတာအမှန်ပဲ။ မင်း သံသယမရှိနဲ့။ သူတောင်းသလောက် ပေးလိုက်။ သူသာ မျက်စိမြင်ရင် ဒီလိုစကားမျိုး မင်းသေတဲ့အထိ ကြားရမှာမဟုတ်ဘူး။ တန်ပါတယ်ကွာ။ ပေးလိုက်…. ပေးလိုက်"
ရွာတစ်ရွာသို့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး မဲဆွယ်ရန် ရောက်လာသည်။ ရွာအစွန်ရှိ နေအိမ်တစ်လုံးရှေ့ရောက်သော် အိမ်ရှေ့၌ လူငယ်တစ်ဦး နွားနို့ညှစ်နေသည်ကို နိုင်ငံရေးသမား တွေ့မြင်ပြီး ယင်းလူငယ်အား စည်းရုံးမဲဆွယ်ရန် ချဉ်းကပ်သွား၏။ နိုင်ငံရေးသမားက လူငယ်အား "လုပ်ငန်းတွေ အဆင်ပြေရဲ့လား" ဟု စကားစလိုက်သည်နှင့် အိမ်အတွင်းမှ အဘိုးအိုတစ်ဦး၏ အသံထွက်လာ၏။
"လူကီ၊ မင်းဘယ်သူနဲ့ စကားပြောနေတာတုန်း။ အိမ်ထဲကို ၀င်တော့လေ"
"၀င်တော့မှာပါ အဘိုးရဲ့။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် ရောက်လာလို့ စကားပြောနေတာပါ"
"ဟေ့… ဟုတ်လား။ ဒါဆို မင်း အိမ်ထဲဝင်ရင် ငါ့နွားပါ အိမ်ထဲခေါ်လာခဲ့"
ဖခင် - သား၊ ဘာဖြစ်လို့ သင်္ချာမှာ အောင်မှတ်မရတာလဲ။
သား - တနင်္လာနေ့တုန်းက ဆရာမက ၃ နဲ့ ၅ ပေါင်း ၈ ရတယ်လို့ သင်တယ် ဒက်ဒီ။
ဖခင် - ပြီးတော့ရော။
သား - အင်္ဂါနေ့ကျတော့ ၄ နဲ့ ၄ ပေါင်းရင် ၈ ရတယ်လို့ ပြောပြန်တယ်။
ဖခင် - အင်း၊ ပြောပါဦး။
သား - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျတော့ ၆ နဲ့ ၂ ပေါင်းရင် ၈ ရတယ်လို့ ထပ်ပြောတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ကျတော့ သုညနဲ့ ၈ ပေါင်းရင်လည်း ၈ တဲ့။ သောကြာနေ့ကျတော့ ၈ ရအောင် ဘယ်လိုပေါင်းကြမလဲဆိုပြီး စစ်တယ်လေ။
ဖခင် - အဲဒါကို မင်းကမှန်အောင် မဖြေနိုင်တာပေါ့။ ဟုတ်လား။
သား - ဘယ်ဟာက အဖြေမှန်လဲဆိုတာ သားဘယ်လိုလုပ် သိမှာလဲလို့။
The VOICE Weekly ဂျာနယ်များမှ ဟာသများဖြစ်ပါသည်။
« Reply #171 on: May 26, 2011, 09:49:38 AM »
သမီးများ ၊ သမီးရှင်များ နှင့် သားရှင်များ သိစေရန်
ကောင်မလေးတွေကို ကောင်လေးတွေစာပေးတာတို့ စကားလိုက်ပြောတာတို့က ခုမလိုတော့ဘူး ခုချိန်က တို့ယောက်ျားတွေ ဈေးတန်တဲ့ခေတ်
21 ရာစုမှာ မိန်းမတွေရင်ထုပြီးရင်လင်လုရမယ်
ထို့ကြောင့် သားကညာ အခါမလင့်အောင် ကောင်မလေးတွေ ကိုရီးယားလိုတစ်မျိုး
တရုတ်လိုတစ်ဖုံ အင်္ဂလိပ်လိုတစ်သွယ် ရည်းစားစကားပြောနည်း သင်ထားကြရန် အထူးလိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်
၁။ ။ ကိုရီးယားရည်းစားလုနည်း
၂။ ။ တရုတ်အိမ်ထောင်ရေး
၃။ ။ တလင်မရတလင်ပြောင်း
၄။ ။ ရေလာပင်လယ်ဖောက်လင်ကောက်နည်း
၅။ ။ စွဲစိနည်း
၆။ ။ ယောက်ခမအကြိုက်အလိုက်ဆောင်သားတောင်းနည်း
၇။ ။ မရမကအိမ်ပေါ်တက်နေနည်း
၈။ ။ မင်္ဂလာသတို့သမီးနေရာဝင်လုနည်း ( ဆုဖုရားလတ်လည်းသုံးဖူးတယ်)
၉။ ။ ယောက်ျားခိုးပြေးနည်း
၁၀။ ။ တင်တောင်းနည်း (ဒါကတော့ ချမ်းသာဖို့လိုတယ်)
၁၁။ ။ ငိုယိုတောင်းနည်း (ကလေးများထံမှသင်ထားကြရန်)
၁၂။ ။ မတွေ့က တခုလပ်မကျန် မုဆိုးဖိုအဆုံး ကတုံးပါ အသုံးချရန် (ကန်တော့ကန်တော့ ဘုန်းဘုန်းများသတိထားပါ )
၁၃။ ။ သား မွေးသည်သတင်းကြားရင်ဆေးရုံသွားခိုးရန်
၁၄။ ။ ကြက်ကို ဥမှ အကောင်ဖောက် သည်ထိ ကြည့်ကာ ဥဖောက်နည်းသင်ထားရန်( ထမင်း နဲ့ ကြက်ဥကြော်တတ်အောင်)
၁။ ။ ဆန်တစ်အိပ်နဲ့ မန်းလေးတောင်အသွားစရ်ိတ်
၂။ ။ အိမ်တွင်းပိတ် သားများ သော့ခတ်သိမ်းထားရန်
၃။ ။ မ ဆိုလျှင် သားရှေ့ ခြေမပင် ငုံ့မကြည့်မိရန်
၄။ ။ ခါးတောင်းကြိုက်တတ်ရန် (လိုအပ်ရင်ပြေးရမှာ သမီး၇ှင်မိဘတွေက ခုတောင်….)
၅။ ။ စိန်တစ်ဆင်တင်တောင်းသော မိန်းကလေးများကို မပေးမိစေရန် (ဈေးနည်းသောကြောင့်)
၆။ ။ မြေအောက်ခန်းထားထားကြရန် (ပုန်းခိုနိုင်ဖို့)
၇။ ။ ရက်ကွက်ထဲတွင်ပလာတာမှအစ မုန့်ပစ်သလပ် အဆုံးရောင်းသည့်ဆိုင်များသို့ အသွားအလာမရှိစေရန်
၈။ ။ မိန်းကလေးများကို ခေါင်းခေါက်ရွေးတတ်ရန် သားနှင့်အတူ သင်တန်းတက်ထားရန်( ထို သင်တန်းကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဦးစီးကာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်
ဖွင့်နေပါပြီ ) ( မိန်းကလေးများမသိစေချင်လို့)
၉။ ။ လာတောင်းမိန်းကလေးတို့အား စာမေးပွဲစစ်ဆေးရန်( ဆေးစစ်ဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် အဟိ)
၁။ ။ သားတွေ့လျှင် အိုအိုပျိုပျို အမြန်ပေးစားရန်
၂။ ။ အသက်ကြီးအသက်ငယ်မခွဲခြား တွေ့လျှင် သမီးများကိုစွဲစိ ခိုင်းရန်
၃။ ။ ယောက်ျားလေးဘော်ဒါဆောင်များသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်ပို့ပေးရန်
၄။ ။ သမီးများကို လက်ဝတ်ရတနာများဆင်ထားရန် (တွေ့တာနဲ့ခိုးပြေးလို့ရအောင်)
၅။ ။ လိုအပ်ရင် ကိုယ်တိ်ုင်ကိုယ်ကျ တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း ယောက်ျားတောင်းပေးရန်
၆။ ။ အိမ်တွင် ကာယဗလပုံများ ကပ်ထားရန်(ကြီးလေကောင်းလေ)
၇။ ။ အိမ်တွင် အင်တာနက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဆုံအလင်ထားရှိစေရန်။(ဝင်လာသောသူ လိပ်စာမေးကာ အိမ်သွားခိုးခိုင်းရန်)
3. ဟမ်းဖုန်းနှင့် အသံဖမ်းထောက်လှမ်းရေးဆက်
၈။ ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့လျှင်အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကိုယ်တ်ုင်ကိုယ်ကျ သူတောင်းစားတောင်းတောင်းရန်(အဟိ )
သားတိုက ဘုန်းနဲ့ကံနဲ့ ရွှေသဇင် ယောက်ျားလေးများ တတ်ထားသင့်သည့်အချက်တွေကထည့် ပြောစရာလိုဘူးထင်ပါတယ်
ခရက်ဒစ် တူ http://myanmarinsingapore.com/
« Reply #172 on: May 26, 2011, 10:00:27 AM »
MAI မြန်မာ့ လေကြောင်း မှ လှိုက်လဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်…
Posted by zinsmartboy on June 11, 2010 at 9:59pm
Send Message View zinsmartboy's blog
မင်္ဂလာ ရှိသော မနက်ခင်းပါ၊ မြန်မာ့ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းမှ ထိုင်နေသာခရီးသည်များနှင့် မတ်တက်စီးနင်း လိုက်ပါလာသော ခရီးသည်များကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါ
တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လေယဉ်မှူး သူရိန် ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းများအားလုံး ကိုယ့်ထိုင်ခုံ တွင် ထိုင်ကြရန် နှင့်
မတ်တက်ရပ်သူများ သေချာ မတ်တက် ရပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လေကြောင်း မှ ခရီးစဉ်ချိန် ၄ရက် နောက်ကျသွားခြင်းကြောင့် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ရာသီဥတု မကောင်းတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Flight 747 စင်္ကာပူ မှ မြန်မာပြည် ကို ပျံသန်း နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ် ဘယ်နား
ရပ်နားမယ်ဆိုတာတော့ ပြောလို့ မရပေမဲ့ မြန်မာပြည် တစ်နေရာရာမှာရပ်နားမှာတော့ ကြိမ်းသေပါတယ်။ ကံကောင်းရင် လူကြီးမင်းတို့ နေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ လေကြောင်းဟာ ခရီးစဉ်အားလုံး ဘေးကင်းစွာပဲ
ပျံသန်းနေတာကြာပါပြီ၊ ဘယ်လောက် အန္တရာယ် ကင်းသလဲဆိုရင် အကြမ်းဖက်
သူတွေတောင် ကြောက်ပြီးမစီးကြပါဘူး။ သတင်းကောင်းပါး လိုက်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ခရီးသည် ၃၀%ဟာ သူတို့ သွားလိုတဲ့ ခရီးကို မြန်မာ့လေကြောင်း ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသည်များ တောင်းဆိုချက်အရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လေယာဉ်ပန်ကာ အင်ဂျင်ဟာ နားငြီးတယ် ဆိုရင် ပိတ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ တကယ်ဘုရားတရားမကိုင်းရှိုင်းသူများ ကျွန်တော်တို့ လေကြောင်းဟာ ဘုရားရှိလား မရှိလားဆိုတာကို တကယ်ရှာဖွေပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ In Flight ရုပ်ရှင်ကတော့ တီဗီက ပြသနေတာတွေကို ကူးယူဘို့မေ့သွားလို့ ကြည့်ရှုလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နဲ့အမြင့်ချိန်တူ ဘေး မနီးမလှမ်းမှာ ပျံသန်း နေတဲ့ Emirate
Airline မှာ ပြသ နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ညာဘက်က ပြုတင်းပေါက်တွေကနေလှမ်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လေကြောင်းအားလုံးတွင်ဆေးလိပ် မသောက်ကြရန် နှင့် မီးခိုးငွေ့တွေ့ပါက ကျွန်တောတို့ တပ်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျင်စက် က အရှိန်လျှော့ရန် အချက်ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွားများ ဘယ်ကနေ ဘယ်ကို ပြန်သန်းနေတယ်ဆိုတာ
လမ်းတစ်လျှောက်မြင်ဖူးတယ်ရှိအောင် အတတ် နိုင်ဆုံး မြေကြီးနဲ့ ကပ်ပြီး
သိပ်ကပ်သွားတယ်ဆိုရင်လဲ အကြောင်းကြားပေး စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ
လေကြောင်းဟာ မကြာခင်မှာ ဆင်းသက်တော့မှာမို့ ခါးပတ်များ ပတ်ထားကြရန်နှင့်
ခါးပတ် ရှာမရသူများ ၊ ကိုယ့်ခါးမှာ ပါလာတဲ့ ခါးပတ်ကို ထိုင်ခုံနှင့်
ချီထားကြပါရန်၊ ထိုင်ခုံ မရှိသော ခရီးသည်များ ဘယ်လို ခါးပတ်ပတ်ရမည် မသိပါက၊
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လေယဉ်မယ်များကို ကိုယ်ပါလာတဲ့ လက်ကိုင်အထုတ်တွေနဲ့
ဘယ်လို ချီရမယ်ဆိုတာ ကို အကူအညီ တောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့
လေကြောင်းဟာ ခရီးသည်များ ခေတ်မှီစွာ လက်မှတ်များ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် အင်တာနက်မှ
တဆင့် ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မီးပျက်တာရယ်၊ အင်တာနက် ဆာဗာ များ
လေးလံတာရယ်၊ ကမ္ဘာ့သုံး ငွေကြေးကဒ် စနစ်မရှိသေးသောကြောင့်
လက်မှတ်ဝယ်ရာတွင် ပုံမှန်လိုပဲ ငွေကို ကောင်တာတွင် လက်ငင်းချေပါရန်
ခရက်ဒစ် တူ http://myanmarinsingapore.com
« Reply #173 on: May 26, 2011, 10:03:28 AM »
တွေးခေါ်ရှင် အရစ္စတိုတယ်က အလက်ဇန်းဒါးဘုရင်ကို ပြောသည်။
"ကိုယ့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို လူနှစ်ယောက်ကို တစ်ပြိုင်တည်း မပြောပါနဲ့၊ အဲဒီလျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားသွားရင် ဘယ်သူတရားခံလဲဆိုတာ သိနိုင်မည်မဟုတ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကို အပြစ်ပေးပါက အပြစ်မရှိသူ နစ်နာရမည်။ နှစ်ယောက်စလုံးကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါလျှင်လည်း အပြစ်မရှိသူကို သူကောင်းပြု ချီးမြှောက်ရာရောက်မည် မဟုတ်ပါ"
ဒါရာနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန် အလက်ဇန်းဒါးဘုရင် ပြင်ဆင်သည်။ ဒါရာဘုရင်က ဆက်သားစေလွှတ်ပြီး သတိပေးသည်။
"ဒါရာမှာ ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်၊ ငါ့နောက်မှာ အင်အား (၇)သောင်းရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့"
"သိုးအုပ်နဲ့ သားသတ်သမားကိုခြောက်လို့ ကြောက်မယ်မထင်နဲ့"
"စကားများများပြောလျှင် အကျိုးရှိပါသလား" ဟု တရုတ်တွေးခေါ်ရှင် မိုစီ (၄၇၉-၅၀၀ ဘီစီ) ကို တပည့်တစ်ဦးကမေးရာ ၎င်းကဖြေသည်-
"အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားချည်းပြောနေလို့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ၊ ဥပမာ ဖားကိုကြည့်၊ ဖားဟာ နေ့ညမရွေးအော်နေတယ်၊ အော်ရလွန်းလို့ သူ့ပါးစပ်တောင် ခြောက်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ဘူး၊ အဲ... ကြက်ဖကျတော့ မနက်ပိုင်းမှာ နှစ်ခါ သုံးခါပဲ တွန်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေအားလုံး သူတွန်တာကို ဂရုတစိုက် နားထောင်ကြတယ်၊ မိုးလင်းပြီဆိုတာကို သိကြတာကိုး၊ ဒါကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိတာကိုပဲ ပြောသင့်တယ်"
ရောမခေတ်စာရေးဆရာ ကန်တွန်စီနီယာ (၂၃၄-၁၄၉ ဘီစီ) ကို ၎င်း၏ ပရိသတ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
"ရောမမြို့မှာ ဆရာကြီးရဲ့ ရုပ်တုကို မစိုက်ထူသေးတာ ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ဘူး၊ တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မယ်"
"ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့၊ ကန်တွန်ရဲ့ ရုပ်တုကို ဘာဖြစ်လို့ စိုက်ထူထားရသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းထက် ဘာဖြစ်လို့ ကန်တွန်ရဲ့ရုပ်တု မရှိရသေးတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်း မေးတာကို ကျုပ်ပိုကြိုက်တယ်"
ဂရိသင်္ချာပညာရှင်ကြီး အက်ဖ်ကလီးဒီစ် (ဘီစီ ၃ ရာစုခန့်) ကို တစ်နေ့သော် ၎င်း၏ဆရာဖြစ်သူက မေးသည်။
"ဆိုကြပါစို့၊ ပန်းသီးနှစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ထက်ခြမ်းခွဲထားတဲ့ ပန်းသီးလေးစိတ်ကို ကြိုက်တာယူပါလို့ပြောရင် မင်းဘာကိုယူမလဲ"
"ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ နှစ်လုံးနဲ့ လေးစိတ်ဟာ အတူတူပဲ မဟုတ်လားကွဲ့"
နောက်ပိုင်းတွင် သင်္ချာပညာရှင်ကြီး ဖြစ်လာမည့် တပည့်ကျော်က ဤသို့ဖြေသည်။
"အတူတူဖြစ်တယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး ဆရာကြီး၊ အလုံးလိုက်ယူလိုက်ရင် အထဲမှာ ပိုးရှိ-မရှိ ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်ပါ့မလဲခင်ဗျာ"
တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်အမျိုးသမီးကို ထမင်းစား,စားပွဲသို့ တွဲခေါ်ရင်း မတ်တွိမ်းက ပြောသည်။
ကျေးဇူးတင်စကား ပြောရကောင်းမှန်းမသိသည့် အမျိုးသမီးက ပြန်ပြောသည်။
"ရှင့်ကို အလားတူစကားမျိုး မပြောနိုင်တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းပါတယ်"
မတ်တွိမ်း ပြုံးရယ်ပြီး အကြံပေးလိုက်သည်။
"မခက်ပါဘူး၊ ကျွန်တော့်လိုပဲ လိမ်ပြောလိုက်ပေါ့"
ပြင်သစ်ဂီတစာဆို အောဘာသည် ပဲရစ်သို့ ရောက်လာသည့် ဗတ်ဂနာနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ဗတ်ဂနာကို ၎င်းက ရယ်ရယ်မောမောနှင့်ပြောသည်။
"နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်နီးပါးကြာမှ ကျွန်တော့်မှာ ဂီတပညာ မယ်မယ်ရရ မရှိဘူးဆိုတာ သိရတော့တယ်ဗျာ"
"သိတော့ ဂီတလောကကို စွန့်ခွါလိုက်ရောလား"
"ဟင့်အင်း၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် နာမည်ကြီးနေပြီ"
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြင်သစ်လူမျိုးသည် အယဉ်ကျေးဆုံးဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤအချက်ကို စာရေးဆရာမ ကားပလက် မမျှော်လင့်ဘဲ ပဲရစ်မြို့ သင်္ချီုင်းဟောင်းတစ်ခုတွင် တွေ့ခဲ့ရသော အုတ်ဂူပေါ်က စာတန်းက သက်သေထူလေသည်။
"ကျွန်ုပ်အနားယူသောနေရာသို့ မိတ်ဆွေရောက်လာချိန်တွင် ထပြီးမကြိုနိုင်သည့်အတွက် တောင်းပန်ပါသည်"
တစ်နေ့ မတ်တွိမ်း နေမကောင်းဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်က အစားအသောက်ရှောင်ရမည်၊ တစ်နေ့ကို နွားနို့တစ်ခွက်နှင့် မုန့်ခြောက် ၂-ခုထက် ပိုမစားရဟု ပြောသည်။
မတ်တွိမ်းက အံ့သြသံဖြင့် ပြန်မေးသည်။
"ခင်ဗျားရောဂါက ဒီထက်ပိုစားရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျ"
"အင်းလေ၊ ဒီလိုဆိုတော့လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော့်ကို တံဆိပ်ခေါင်းတစ်လုံးသာ ပေးပါ"
စာရေးဆရာနှင့် အနုပညာရှင်များ၏ ညစာစားပွဲတစ်ခုတွင် ထုံးစံအတိုင်း ရုရှားစာရေးဆရာကြီး ဂေါ်ကီ (၁၈၆၈-၁၉၃၈) သီချင်းဆိုပြသည်။ ၀ိုင်းတွင်ရောက်နေသော ချက်ကော့ကို ၀ိုင်းမေးကြသည်။
"ဂေါ်ကီဟာ ဘာဖြစ်လို့ မျက်စိပိတ်ပြီး သီချင်းဆိုတာလဲဟင်"
"သူ့ဆီမှာ ကြင်နာတတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးရှိတယ်လေ။ သူများတွေ ခံစားရတာကို သူ မကြည့်ရက်ဘူးဗျ"
« Reply #174 on: May 26, 2011, 10:07:07 AM »
Just for laughing !!!!
A man suspected his wife of seeing another man, so he hired the famous
Chinese detective, Chen Lee, to watch and report any activities while
he was gone. A few days later, he received this report:
MOST HONOLABLE SIR:
I WATCH HE AND SHE LEAVE HOUSE.
I FALL OUT OF TREE.
ဘိုလို ဖတ်ရတာက ပိုပြီး ရယ်ရလို့ ဘာသာ မပြန်တော့ဘူးနော်.... (ဘာသာပြန်ရ ပျင်းတာလဲ ပါပါတယ်.... ဟီးးးး)
« Reply #175 on: May 26, 2011, 10:20:26 AM »
ကိုလှထွန်း……….”စိတ်ချပါကွာဒါနဲ့မင်းပြန်လာရင်အင်္ဂလန်ကဘိုမတစ်ယောက်လောက် သယ်ခဲ့ဟေ့…အဖြူမလေးတွေအရမ်းမိုက်တယ်လို့ပြောသံကြားဖူးတယ်..ဟား ဟား ဟား…..”
ငါကတော့ပိုပြီးသတိရတာပေါ့ကွာ..ဟီးဟီး…ဒါနဲ့ ငါမှာလိုက်တဲ့ ဘိုမလေးရော….”
« Reply #176 on: May 26, 2011, 12:54:39 PM »
Posted by Grace on January 11, 2010 at 10:48am
Send Message View Grace's blog
ရေးသူ။ ။ ကိုရေတမာ
နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗဒ္ဓဿ
ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ။ ဆိုက်ပရက်စ်ပြည့်ရှင်မင်းကြီး၏ သားတော် မင်းသားဖိုးစိန် စင်ကာပူပြည်သို့ သွားစေ။ စင်ကာပူပြည်က အပြန်၊ ဘီယာဆိုင်၌ နားနေစေ။
၎င်း စင်ကာပူမြို့ မြောက်မျက်နှာက အိုင်တီ ယောက်ျား ထွက်ဆိုရန် စကားမှာ-
သြော်- လူ့ဘုံခန်းဝါ၊ စင်ကာပူပြည်မှာ၊ ၀မ်းစာခဲခက်၊ နာစီ ဂိုးရင်း(မလေး ထမင်း)၊ ဂရင်းတီးနှင့် ဆန်တွင်းက နက်လွန်းလို့၊ အသက်ရှိစဉ်၊ မသေခင်ကို၊ စပါကတီ၊ ခပ်အီအီနှင့်၊ ဟော့ပေါ့အမည်၊ ရေလုံပြုပ်များကို၊ ၀မ်းတေဘယ်တမျှ ခပ်၀၀ စားလိုက်ရလျှင်ဖြင့် အာဂပါးစပ်၊ လူဖြစ်ကျိုးနပ်လေငဲ့၊ မရပ်မနား၊ ကီးဘုတ်ကြားမှာ၊ ၀မ်းကျောင်းပါငြားကဘဲ၊ စားရသည့်နေ့၊ တလလုံးတွင်မှ သုံးဆယ်နှပ်လောက်ကယ်သာ တွေ့ရတယ်။ ငွေနှယ်ကြေးနှယ်၊ ဘဟာ့နှယ်များကို၊ ကွယ်လေငဲ့ ပိတ်ပိတ်ပျောက်၊ အမွဲတကာ့ ထွတ်ခေါင်၊ ဖွတ်မင်းနောင်မှာ၊ ပြာတောင်ကြီး ပေါက်ကရော့၊ ပြောင်မြောက်အောင် မွဲနိုင်တဲ့၊ ငါ့ကိုယ့်နော်။
ဟယ် သို့သော်လဲ ယောက်ျား၊ စင်ကာပူသွား စင်ကာပူသားဟဲ့၊ မနုံနဲ့ပါဘူး။ အလှဲ့သင့်ချက်ပိုင် ခွေးကန်းတောင် အိမ်သာကျင်းထဲ ကြနိုင်သေးသပ၊ ကံဆိုင်လို့ တကယ်၊ ချက်ကောင်းကို တွယ်မိလျှင၊် အိုင်တီ တောင်ပေါ် လူနေလှလို့၊ ရွှေချသလို ပြောင်လိမ့်မယ်၊ အဆောင်တော် လပ်တော့ နှင့် အင်စတော်လာ စုံအလင်၊ အန်တီ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဒေါ်လာနှင့် လဲရအောင် မြို့ထဲသို့ ၀င်တော့မယ်၊ မှန်ဝိုင်းရှင် ဘော်သုံးက၊ လပ်တော့ကိုဆက်။
မြို့တောင်မျက်နှာက အော်တိုကတ် အမျိုးသမီး ထွက်ဆိုရန်စကားမှာ-
သြော် စင်ကာပူရခေါ်၊ သည်ပြည်တော်မှာ၊ အကျော်ဇေယ၊ ခေါင်မှာစွဲအောင်၊ မွဲတေလှတဲ့၊ ကျွန်မ ကိုယ်ငယ်၊ တခါတရံ၊ လောကဓံမှာ၊ ကံမျက်စေ့ လယ်လို့မှ၊ ပြောင်နိုင်တယ် မရှိ။ Draft ဆွဲလို့ရောင်း၊ ၀မ်းကိုကျောင်းရတယ်။ အကြောတက်လို့ ဂိခဲ့ပြီ။ အသားတ၀က်၊ အရွက်တ၀က်၊ ထမင်း ပြက်သိကာ တရုတ်မ ဆိုင်မှာ၊ ဟင်းလျာက ဘီဟွမ်း(ကြာဆံ)၊ လည်ချောင်းကို မြေလှန်၊ ဂလုံဆန်အောင်၊ စုံကန်လို့မျှောရတယ်၊ ကောလိုက်တဲ့ကံ။ နာစီ ဂိုးရင်းနှင့် သောက်ရန်ချိုရည်၊ ကျွေးနိုင်တဲ့ မောင်များကို၊ လူ့ဘောင်တွင်တခါ၊ ကြုံစမ်းချင်ပါဘိ၊ ဇာတာထွန်းပေါ် ကံနှိုးဆော်လို့၊ မတော်တဆ၊ နာစီ မောင်မောင်၊ ဦးအချိုရည်ရို့နှင် အိမ်ထောင်များ ကျခါမှ၊ ၀၀ကြီး ဖောင်းလန်အောင် ၀မ်းစည်းစိမ်ခံတော့မယ်။
သြော်၊ တောင်ကြံမြောက်ကြံ၊ ဘရံတောက်တီး၊ ဆင်းရဲခန်းကို နိဒါန်းသွယ်လို့၊ ဘဲ့နှယ်ပင် ငြီးသော်လည်း၊ ဆန်နီးမယ် မဟုတ်၊ အော်တိုကတ် များများဆွဲနိုင်မှ ဒေါ်လာကို ကုပ်မိမယ်၊ တိုပေတောင့် စကပ်။ အနံက တထွာ၊ အလျားက တမိုက်၊ ကျော်ခွလျှင် မဖြစ်ပါတဲ့ မီနီစကပ်ကို သုံးလေးခါ ဖြန့်ကာ ဆန့်တယ် ပြုံကမ်းတွေကိုရွက်၊ မူရာတော် ကုပ်ချောင်းချောင်းနှင့် ပုံရောင်းထွက်တော့မည်၊ ကိုးမျက်စုံ မှန်ဝိုင်းလယ်က ပုံသည်ကို နေမမြင့်ရအောင် ဘတ်စ်ကားခ မစပါ့ဦး မောင်ကြီးရှင့်။
တက္ကသိုလ်က ပြန်သော မင်းသားထ၍၊ ပြည်တော်သို့ရောက်စေ။ ခမည်းတော် သဘောအရ သော့အားလုံး မင်းသားလက်အပ်ခါ ဟောလီးဒေးသွားစေ။
အထက်က အိုင်တီ ယောက်ျားနှင့်၊ အော်တိုကတ် အမျိုးသမီးတို့တွေ့ကြရာ၊ မိန်းမက ဆိုရန်-
မျက်တွင်းဟောက်ပက်၊ အိတ်ကြိုးပျက်နှင့် ဘောင်းဘီညစ်ထေး၊ ခေါင်းမွေးဖြူတဲ့၊ ကျုပ်ဖအေငယ်၊ အင်စတော်လာ ရောင်းစား မောင့်စွမ်းအားနှင့် စီးပွားတနှစ်၊ ဘဲ့လောက်များ ဖြစ်ပါတုံး၊ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်၊ ၀မ်းရေးလောက်၍၊ စားသောက်သည်ပြင်၊ လက်ကပ်ခြေကပ်၊ ပိုမိုမြတ်လို့၊ အဖတ်တင်၊ အိမ်ပြန်ပို့ရ၊ ကျူပ်မောင်လှမှာ၊ ငွေစဘဲ့လောက်များသလဲ။ ခါးဝတ်လဲမှာ၊ မလွဲစင်စစ်၊ မျက်မြင်ဖြစ်၍၊ မစစ်သာဘူး၊ ဘလာချာချွတ်ခြုံ၊ ဖွားဖက်တော်မှ မပေါ်ရုံ၊ လုံအောင် အနိုင်ဖုံးရတယ်၊ စားဖွယ်သောက်ခင်း၊ ဘယ်ထမင်းနှင့်၊ ဘယ်ဟင်း ချဉ်ချို၊ ဘယ်နှယ့်များ မျိုရတုံး၊ နှမလိုစိတ်ကစွဲလို့၊ ဖြစ်နဲကို ပြန်စမ်းပါ မောင်ကြီးရယ်။
အိုင်တီ ယောက်ျားဆို။ ဆံပင်အဖြောင့်၊ တော်ကြာကောက်နဲ့ ခါးစည်းဝတ်လဲ တထွာတည်းကို ဟိုခွဲဒီခွဲ အကုန်ခွဲတဲ့ မမရယ်၊ အင်စတော်လာရောင်း စီးပွားကြောင်းနှင့် လူကောင်းကိုယ့်မောင်၊ ရုံးလှဆောင်၊ ၀အောင်စား၍၊ ခါးဝတ်တဲ့ပြင်၊ လက်ကပ်ခြေကပ်၊ ပိုမိုမြတ်လို့ အဖတ်တင်၊ MRT များ ATM ကြား၌ လုံစွာထား၊ ဒေါ်လာလေးရာ ရှိပါတယ်။ သည်ပစ္စည်းတွေ လေးရာငွေကြောင့် စိတ်သေလက်ချ၊ မအိပ်ရနိုင်ဘူး။ ညမှုညလူ၊ ကြွေးရှင်များဘူလွန်းလို့၊ ဟိုပုန်းဒီပုန်း တကုန်းကုန်းနှင့် ပုန်းခဲ့ကာလ မနည်းလှပြီ၊ ညစာနံနက်၊ စားရရက်မှာတော့၊ မဆာလာရောရော နာစီဆိုတဲ့ ထမင်းဟင်းကို ဂရင်းတီးနှင့် လည်ချောင်းကို စင်းပြီးလျှင် အတင်းသာ သွတ်ရတယ်၊ ခါးဝတ်လဲမှာ မျက်မြင်ပါဘဲ၊ ဥစ္စာပြည်စုံ၊ ဓနဂုဏ်နှင့် ကုံလုံဘိခြင်း၊ မသိမ်ဖျင်းပါဘူး၊ လူဆင်းရဲ မမှတ်ပါနှင့် အမိငယ်။
အော်တိုကတ် အမျိုးသမီးဆို။ ငွေလေးရာနှင့် ဋ္ဌေးအောင်ကြွယ်ဝ၊ ဥစ္စာပေါတဲ့ ဇောတိကငယ်၊ နှမမှာလဲ သည်လိုပဲ၊ ဘဏ်ထဲသို့မြုပ်၊ ကိုယ်သဘောကျ၊ ခင်ပွန်းများ ရခဲ့လျှင် သူထိန်းမကြီး လုပ်မယ်လို့၊ ငွေထုပ်ကြီးမား လူမသိအောင် ဖုံးဖိလို့ထားလိုက်တယ်၊ စီးပွားဆောက်ဦး၊ ကံချင်းဘဲနီးရောထင့်၊ မောင်ကြီးနှင့်တူရာမှာ၊ ငွေစိမ်းလေးရာ ရှိပါတယ်။ သည်ငွေလေးရာ ဥစ္စာဝန်လေးလွန်းလို့ အရေးမတော် ဖဲသမား ကတော်များ ဖြစ်ခဲ့သော်၊ ကူဖော်လောင်ဖက် မရှိရင် ခက်ထာမို့၊ နှစ်သက်လောက်သူ၊ စည်းစိမ်ကြီးကို ထီးလိုအုပ်၍ ချုပ်မည့်လူကို တဆူယောက်ျား ဇမ္ဗူမှာ ရှားလွန်းလို့၊ လင်သားမယူ၊ အပျိုကြီးလုပ်၍ ရွက်အုပ်သီး ပူရတယ်။ ကံတူတဲ့မဲ့သခင်၊ ဘယ်ခါမှ စုရုံးလို့၊ ရွှေပုံးရည် ချဉ်မယ်သိ၊ ထင်ရမက်ကယ်နှင့် စောင့်လျက်သာ နေရပါတော့တယ်၊ ကျုပ်မောင်ငယ်။
အိုင်တီ ယောက်ျားဆို။ ။ သုံးစွဲမကုန်၊ တောင်နှယ်ပုံ၊ ငွေမှုံလေးရာ၊ ခြိမ့်အောင်ကြွယ်တဲ့၊ မယ်သူဋ္ဌေးငယ်၊ ရွေးလွန်းလျှင်မရ သေးလွန်းလျှင် မလှတဲ့၊ ရှေးကပုံထား၊ လူထဲမှာနေ၊ လူ့ဖြစ်ထွေကို အကျေသားနှင့်၊ ဇာတ်သွားရှည်အောင် အရေးဆောင်လို့ ကွေ့ချောင်ေ၀၀ုစ်၊ ဘောက်စရာလုပ်ရတုံး၊ ငွေထုပ်ချင်းတူ၊ လူရွယ်ချင်းမျှ၊ အလှချင်းနတ်ဖက်၊ တိုင်း၍ရက်တဲ့ ပက္ကလာ၊ မိုးရွာသည်နှင့် အခန့်သင့် အခွင့်ဆီဆိုင်၊ အတိုင်အလှဲ့၊ အစပ်ဖြင့်တဲ့လှပေါ့ ဂျင်ပဲ့ချင်းပေါက်ကြစို့၊ နောက်မဆုတ်တမ်း၊ သည်ယနေ့တွင်ဖြင့်၊ ဘီလူးတွေ့လက်ရ သိမ်းလို့ အစိမ်းဖမ်း ဖမ်းတော့မည်၊ ပတ်ကြမ်းတီး၊ ပွဲပြီးစေကြစို့ငဲ့လေ အမိရယ်။
အော်တိုကတ် အမျိုးသမီးဆိုရန်။ ။ မကြီးသက်လှယ်၊ မျက်ထားချိုတဲ့ ကိုကိုရယ်၊ ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်၊ အတင်းအကြပ်၊ နောက်ပိုးထပ်လို့၊ ခွေးငတ်နှင့် ဖိနပ်ပြတ် ဖြစ်လေသည်။ ဘယ်နှယ့်တုံး ခုတင်ခု၊ အရပ်မှုဆောင်သလို၊ တော်ရုံပင်သော့ပါရော့၊ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ဂျီတော့က ဇာတ်လမ်းများ ဖန်သရော့ထင်၊ တနပ်စားမကြံ၊ တကယ်တမ်းမှန်ပါလျှင်၊ စားရန်ခန်းဝင်၊ ပွဲလယ်ဝင်ရန်၊ ဒေါ်လာအသပြာ ငွေလေးရာကို မြန်စွာသာ ယူချေတော့ မောင်ကြီးရယ်။
အိုင်တီယောက်ျားဆို။ ။ ဟဲ့ဘကြီးသား၊ တခါများဖြင့် သိကြားစောင်မ အိစိကလိလေးလည်း ရပေပြီ။ လူတကာ့နဲ့ ကြင်ရာနတ်ဖက် မောင်ကြီးသက်ကို လက်ချင်းတွဲလို့ ကလပ်သဘင် အခဲသားဝင်ရအောင် ATM ကြား ငါဝှက်လို့ထားခဲ့တဲ့ ကြေးများစွာကို မကြာချက်ချင်း MRT နှင်း၍ ငွေစယူ ကြွတော့မည်။ မတီးမစောင်း ဗိန်းမောင်း.....
ဂသို့နှယ် ပွားပြီးသကာလ ရှိစုမဲ့ MRT ကဒ်လေးနဲ့ ရထားစီးပြီး ချွေးဒီးဒီးကျနေတာကို ရထားပေါ်က ကောင်မလေးတွေကို မှန်ပြောင်းတလက်နဲ့ ငမ်းကျောထနေတဲ့ ဆိုက်ပရက်စ် မင်းသား တွေ့မြင်လေ၏။ ခါးကြားက ဟမ်းဖုန်းထုတ်၍ လှမ်းပွားလေသည်။
"ပေါ်ပေါ် ဂလောက် လူကြပ်ကြပ်ရထားကို ဘဇာကြောင့် အသည်းအသန်စီးနေတာတုန်း"
"အကိုတော် ဇာတ်မင်းသား၊ ကောင်မလေးနှင့် ကလပ်သဘင် ဆင်နွဲရန် ATM မှာ ငွေသွားထုတ်မလို့ပါ"
"နင် ဘုန်း ထားသမျှ အကုန်ပဲလား၊ မသွားနဲ့ ငါ ၂ ကျပ်တိုးနဲ့ ချေးမယ်၊"
"အကိုတော် ချေးသမျှလည်း ပြန်မဆပ်ဘဲ ယူမယ်၊ ဘဏ်ထဲက ပိုက်ဆံလည်း သွားထုတ်မယ်"
"မသွားနဲ့ ကိုဘိုဘို အကြွေတွေ ရှိတယ်၊ ငါပေးမယ်"
"မင်း အိမ်ရှာနေတာမဟုတ်လား၊ ကိုဘို့ အိမ်မှာ လာနေကွာ ငါပြောပေးမယ်"
ထိုသို့ ကိုဘိုဘို အိမ်တွင် မင်းပြိုင်ပြုနေကြရာ၊ တနေ့သော် စီးတီးဟောမှာ ဇာတ်မင်းသားကိုဖိုးစိန်ကို နပုန်း ပဏ္ဍုက်တယောက်လက်ထဲ ထည့်ပြီး ကိုဘိုကို အပိုင်သိမ်းရန် ကြံစည်လေသည်။ တဖန်လည်း အကိုတော်သည် ငါ့အား နာဂစ်ဒုက္ခသည်ဘ၀လို မဖြစ်အောင် ကူလီကူမာ လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ငါ၏အကြံသည် မသင့်တော်ပါ့လားဟု နပုန်း ပဏ္ဍုက်ဆီပို့မည့် မတ်ဆေ့ခ်ျ်ကိုပိတ်၍ ကြိတ်မှိတ်နေလေ၏။ ဤသို့ သုံးကြိမ် ကြံစည်ပြီးသော် ငါ့အား မကောင်းမှုများလတ္တံဟု ကိုဖိုးစိန်ကို ပြောပြလေသည်။
ထိုအခါ ကိုဖိုးစိန်က "ငါတင်းတယ် ဆိုက်ပရက်စ် ပြန်တော့မယ်။ နင် မင်းမူတော့ ကိုဘို့ဆီမှာ ငါလည်း ဟိုတယ်မှာပဲ နေတော့အံဟု" ဆိုလေသည်။
"အို အကိုတော် မရှိလျှင် ကျုပ်လည်း မနေလိုတော့ပြီ၊ တပ်မက်သော တဏှာသည် ကျုပ်ကို ဖျက်ဆီးလတ္တံ။ တဏှာလောဘ၏ အပြစ်ကို မြင်ပြီ။ အကိုတော်သာ နေပါတော့။ ကျုပ် အရင်လို ၂ ထပ် ခုတင် သုံးလုံးထည့်ထားတဲ့ အခန်းမှာသာ နေပါတော့မည်ဟု ငိုယိုပြီး ပြောမယ် သင်ထင်သလား။ သူတကယ်ပြောတာက ၀မ်းသာအဲလဲ အသံကြီးနဲ့
" အ ဂယ် လားးးးးးး"ဟူသတတ်။
မှီငြမ်း။ ။ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၏ စလေဦးပုည၏ အတ္တုပ္ပတ္တိ နှင့် ဂင်္ဂါမာလဇာတ်ခေါ် ရေသည်ပြဇာတ်
« Reply #177 on: May 26, 2011, 12:56:25 PM »
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံ
Posted by တိတိ on November 16, 2009 at 9:01pm
Send Message View တိတိ's blog
(မြန်မာ စကားသည်အလွန့်အလွန်းကိုရှုပ်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်)
« Reply #178 on: May 26, 2011, 12:57:19 PM »
Posted by khin on November 25, 2009 at 2:21pm
Send Message View khin's blog
Just share the forward mail from my friend.
“အရှင်ဘုရားက ကြေညာချက် စာအုပ်ပဲ တွေ့တာကိုးဘုရား။ တပည့်တော်မှာ နောက်တစ်အုပ် ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ကြေညာချက်တွေ အဲလို လှိုင်လှိုင်ထုတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရေးထားတယ်ဘုရာ)
« Reply #179 on: May 26, 2011, 01:06:13 PM »
မိန်းကလေးများကို အသက်နဲ့လိုက်ပြီး သတ်မှတ်ကြပုံကတော့…
- အသက်(၁၃)နှစ် အရွယ်မှ အသက်(၁၈)နှစ် အရွယ်ထိကို… အပျိုဖြန်း…
- အသက်(၁၈)နှစ်မှ အသက်(၂၅)နှစ်ထိကို… အပျိုစင်…
- အဲ… အသက်(၂၅)နှစ်ကျော်ရင်တော့… အပျိုကြီးလို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပါပြီ…။
- အသက်(၁၀)နှစ်ကနေ (၂၀) အတွင်းက အာဖရိကနဲ့တူတယ်…၊
(စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်… ရှာဖွေစူးစမ်းစရာတွေရှိနေတယ်…)
- အသက်(၂၀)ကနေ (၃၀) အတွင်းမှာတော့ အိန္ဒိယနဲ့တူတယ်…၊
(တည်ငြိမ်လာတယ်… တိုးတက်နေတယ်… အိနြေ္ဒရှိတယ်… သိမ်မွေ့တယ်… )
- အသက်(၃၀)ကနေ (၄၀) အတွင်းကတော့ အမေရိကားနဲ့တူတယ်…၊
- အသက်(၄၀)ကနေ (၅၀)အတွင်းကတော့ ဥရောပနဲ့တူတယ်…၊
(နှစ်လိုဖွယ်ရာ သ်ိပ်မရှိတော့ဘူး… ဟန်ပဲရှိတော့တယ်…)
- နောက်ဆုံး အသက်(၅၀)ကျော်သွားရင်တော့ ဆိုက်ဘေးရီးယားနဲ့တူတယ်…၊
(၄င်းရှိတာကို သိပေမယ့်လည်း… ဘယ်သူမှ မသွားချင်ကြဘူး…)
"အပျိုကြီး" လို့ ခေါ်တာကိုတော့ လုံးဝမကြိုက်ကြပါဘူး…။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ခေါ်လိုက်မိတဲ့အခါ ပြန်ပြောလေ့ရှိတဲ့စကားတွေကတော့…၊
- "ငါ တကယ်အပျိုကြီးဖြစ်နေပြီလား" (စိတ်ထဲက ပြန်ပြောတာ…)
- "ငါ အသက်မကြီးသေးဘူး ထင်တာပဲ…" (မှန်ကြည့်ပြီး ပြောတတ်သောစကား…)
- "ငါ့ အလှကမှ ရင့်ကျက်တဲ့ အလှ…" (ဆယ်ကျော်သက်များက အပျိုကြီးဟု
- "ငါက သူ့ထက်တောင် နုပါသေးတယ်…"
(သူမထက် နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ငယ်သူများ၏ ခေါ်သံကို ကြားရသော အခါ တွေးတောပုံ…)
- "ငါက မဖြစ်သေးပါဘူး… သူတို့ကသာ အရိုးဆွေးနေကြပြီ…" (သူမ၏စီနီယာ
အပျိုကြီး လူပျိုကြီးများက ခေါ်သည်ကို ကြားရသောအခါ ဆင်ခြင်ပုံ…)
အသက်(၂၅)ကျော်လာပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင် မရှိသေးသူများကို အပျိုကြီးလို့ပြောမိရင်တော့…၊
- "ငါက စွံရဲ့သားနဲ့ အပျိုကြီးလုပ်မှာ…"
- "ငါက သဘောကျတဲ့ လူမတွေ့သေးလို့ပါ… တွေ့ရင်တော့… စဉ်းစားမှာပေါ့…"
- "သူများတွေ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာ ငါ့ဖိတ်စာရောက်လာစေရမယ်…"
- "ငါက မစွံပါဘူး… စွံတဲ့သူတွေက ပြောအားရှိတာပေါ့…"
- "ငါက တော်လို့ ငါ့ကို ကြောက်ပြီး… ဘယ်သူမှ… မလိုက်ရဲတာ…"
- "ပိင်္ဂုတ္တရလုလင်တွေက ဥဒုမ္ဗရဒေဝီနားကို မကပ်နိုင်ကြတာပါ…"
- "ပုရိသတွေကို ကြွေအောင်လုပ်ဖို့… ရူပါမလိုပါဘူး… ဗျူဟာပဲလိုတယ်…"
- "ငါက ဘာမှကြိုးစားစရာမလိုဘူး… အိမ်က စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်…"
- "ငါ့အတွက်ဆိုရင် အကူအညီပေးမယ့် ပုရိသတွေများ တန်းစီနေတာပဲ…"
- "မလိုချင်လို့ပါ… လိုချင်ရင် ခေါင်းခေါက်ပြီးတောင် ယူလို့ရတယ်…"
- "ပုရိသတွေကို စိတ်မရှည်လို့ အပျိုကြီးလုပ်နေတာ…"
- "ဘာမှမဟုတ်တဲ့အချစ်နောက်လိုက်မနေနဲ့ အချစ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး…"
- "အပိုအလုပ်တွေမလုပ်ချင်လို့ပါ… တစ်ယောက်တည်းနေတာအေးချမ်းတယ်"
- "သွားမပါရင်နေ… ကားပါရင် စဉ်းစားမယ်…" စသည်ဖြင့်ပေါ့…၊။
(တစ်ချို.ကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး… ပြုံးနေပါတယ်…
တစ်ချို.ကတော့မဲ့ပြုံးပြုံးပါတယ်… တစ်ချို.ကတော့ ခါးသီးစွာ မဲ့ပါတယ်…
မိန်းကလေးတွေက သူမတို့ရဲ့ နုပျိုနေတဲ့ အချိန်တွေကိုအလွန်နှမြောကြပါတယ်…။
အမှန်တရားကိုလည်း လက်မခံနိုင်ကြတဲ့အတွက်ခေတ်ပေါ်Cosmetics များရဲ့
အကူအညီရဲ့ နုပျိုခြင်းကို အချိန်ဆွဲ… ဇရာကိုကျားကန်ထားတတ်ကြပါတယ်… ။
"ဣတ္ထိရူပံ ဓနံ"… ဆိုတော့လည်း… ပြောရခက်သားပဲလေ…။
နောက်တစ်ခုက အပျိုကြီးများ စွံတဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ရှိတာတွေက…
-သူမတို့ရဲ့ ရည်းစားကို အရမ်းချစ်မြတ်နိုးကြပါတယ်…။
(လသားကလေးလက်ထဲကို အရုပ်ကလေးထည့်ထားပြီး ပြန်ယူတဲ့အခါ
လုံးဝလွှတ်မပေးတော့ပဲ အတင်းအကျပ်ကိုင်ထား သလိုမျိုးပါ…)
-မိန်းကလေး ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ သူမရဲ့ရည်းစား စကားပြောတာကိုလည်း မနှစ်လိုပါဘူး…။
(ကောင်မလေးတွေက ငယ်ပေမယ့် မခေဘူး…ပဲကလည်းများ… အသံကလည်း ခရာတာတာ
-တစ်ခြားလူကို ပြောတဲ့ အသံနဲ့ ရည်းစားကို ပြောတဲ့ အသံ နူးညံ့မှုနဲ့
အီစီကလီဖြစ်မှု အဆတစ်ရာလောက်ကွာ ခြားပါတယ်…။
-သူမတို့ရဲ့ ရည်းစားကို အခြားလူများက အကူအညီတောင်းမိရင် အင်တင်တင်နဲ့
အထက်ပါ အချက်တွေက အပျိုကြီးတွေမှာသာ မဟုတ်ပါဘူး… မိန်းကလေး
တော်တော်များများမှာ ရှိတတ်တဲ့ အချက်တွေပါပဲ…။
ကဲပါ...မိတ်ဆွေ… အပျိုကြီးနဲ့များ ကြိုက်မိလျှင်တော့ သင်သတိထားလော့…။
(အနော်တို့ ကျောင်းသူတွေကော ဒီ အချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်တွေနဲ့ ညိကြဘာသလဲခညာ....း) )